လမ်းနှင့်မလွတ်သော သက်တမ်းရင့် သစ်ပင်များခုတ်ရန် ၎င်းင်းကိုယ်တိုင် ညွှန်ကြားထားဟု စစ်ကိုင်းတု? - Yangon Media Group
လမ်းနှင့်မလွတ်သော သက်တမ်းရင့် သစ်ပင်များခုတ်ရန် ၎င်းင်းကိုယ်တိုင် ညွှန်ကြားထားဟု စစ်ကိုင်းတု?
အဆိုပါလမ်းရှိ တမာပင်များကို မေလအစောပိုင်းက မုံရွာခရိုင်လမ်းဦးစီးမှ အပြောင်ရှင်းစနစ်ဖြင့် ခုတ်ရာ မြို့ခံများက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့သဖြင့် ငါးပင်ခုတ်ပြီး နောက် ရပ်ဆိုင်းနေခဲ့သည်။ ”လူ့အသက်တစ်ချောင်းထက် ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူး။ လမ်းနဲ့မ လွတ်ရင် အမြစ်ကနေ မြေလှန်ပါ လို့ ပြောထားတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းကြည့်ပြီးမှ ခုတ်ခိုင်းတာ။ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်စရာရှိလို့ လုပ်တာပါ။ ဖြစ်မှလုပ်တာထက် မဖြစ်ခင်က လုပ်တာ အများအတွက် ရည်မှန်းချက်နဲ့ လုပ်တာပါ။ ကျွန်တော်လည်း သစ်တောမျိုးရိုးပဲ။ သစ်ပင်ကိုသိပ် ချစ်တာ”ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောသည်။
လမ်းသွယ်များမှ ကျောက္ကာ လမ်းမကြီးသို့ အထွက်တွင် မြင် ကွင်းပိတ်နေသော သစ်ပင်များကို အမြစ်မှ လှဲ၍ခုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး စုစု ပေါင်း ၁၁ ပင်ခုတ်ရန် သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက မေ ၂၈ ရက်က လိုက်လံစာကပ်ခဲ့ကြသည်။ မုံရွာမြို့ ရထားသံလမ်းဆုံမှ မြို့ပတ်လမ်းဆွမ်းအုပ်အဝိုင်းအ ထိ တစ်မိုင်နီးပါးလမ်းမကြီးဝဲယာတွင် တမာပင်ပေါင်း ၂ဝဝ ကျော် ရှိပြီး မုံရွာမြို့၏အမှတ်သင်္ကေတ အဖြစ် မြို့ခံများက အမြတ်တနိုး ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သိရ သည်။